Art is My Life: လူတိုင်း မျှော်နေကြတဲ့ အီးစာစောင်တော်ကြီး ထွက်ပြီ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 10:48 PM
ဒါနဲ့ ဒီတန်းပလိတ်က အဆန်းပါလား။ comment တွေသာမြင်ရတယ်။ ဘယ်သူရေးသွားတယ်ဆိုတာ မတွေ့ရဘူး။
ကိုမျိုးကျော်ထွန်းရေ ဟုတ်ပ။ ဘယ်သူရေးလဲ ဆိုတာ မတွေ့ရဘူး ဘယ်လို ဖြစ်သလဲ့ ကျွန်တော်လဲ ပြောတတ်တောပါဘူး
ဟား ဟား လုပ်ပေါ့ဗျာ။ နောက်ဆိုရင် ဘလော့ဂါတစ်ယောက် ဂျာနယ်တစ်စောင်လည်း ဖြစ်လာဦးမယ်။
Phone Myint Oo said...
ခင်ဗျားရဲ့ အီးစာစောင်တော်ကြီးကို အားပေးမဟဲ့လို့ဖွင့်လိုက်တာ ဘာတွေထွက်လာမှန်းမသိဘူး........
HI, I want to write in Burmese but I cannot use Burmese font in this box. Want to givealittle advice for the 'esarsaunggyi'. How do I use Burmese font?
The file link that you requested is not valid\_
only see this massage
can't see yours